थप ५३ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संख्या पुग्यो ३ सय ५७- पर्साका २४ जना संक्रमितलाई बल्ल अस्पताल लाने तयारी – Nepal Japan
थप ५३ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संख्या पुग्यो ३ सय ५७- पर्साका २४ जना संक्रमितलाई बल्ल अस्पताल लाने तयारी
नेपाल जापान ५ जेष्ठ १९:५६
सोमबार बाँकेमा एकैचोटि ४७ जनामा र विभिन्न जिल्लाहरुमा ६ जना गरी ५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ३ सय ५७ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार बाँके जिल्लामा ४७, धुलिखेलमा चार, मोरङ र भैरहवामा एक एकजनालाई संक्रमण भएको हो ।
बाँकेमा ४६ पुरुष र एक महिला, भैरहवामा परीक्षण गरिएकोमा गुल्मीका ४१ वर्षीय पुरुष र धुुलिखेलमा अस्पतालमा परीक्षण गरिएकोमा धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङका एक एक जना रहेको छ ।
सङ्क्रमितहरू १८ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् । उनीहरुको स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा कन्ट्याक ट्रेसिङ सुरु गरिसकिएको प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैबीच कोरोना संक्रमण भएको पुष्ट भएको झन्डै एक सातापछि पर्साका २४ जना संक्रमितलाई क्वारेन्टिनबाट अस्पताल भर्ना गरिने भएको छ । सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएका उनीहरूलाई मंगलबारसम्ममा वीरगन्जस्थित गण्डक अस्पतालमा सार्ने तयारी गरिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले बनुभएको छ ।
गण्डक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि भनेर ७० वटा आइसोलेसन बेड बनाइएको छ । गत मंगलबार राति पर्सामा एकैपटक १८ जना कोरोना संक्रमित देखिएपछि उनीहरूलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गर्न सकिएन। कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको नारायणी अस्पतालमा पनि बेड भरिएको थियो ।